Onye nwere ike kuziere m IT n'ịntanetị?
Uru nke oghere nchekwa Aluminom
Ihe niile banyere njem nke akụ
Njirimara nke nchịkọta maka ihe
Egwuregwu Ogwe Ndị Ọzọ Na-adịghị Ahụkebe Gburugburu Worldwa
Ebe nkiri 10 dị ịtụnanya dị na Thekaddy na gburugburu ya
Kerala bụ ebumnuche nrọ nke ọ bụla hụrụ ụwa n'anya. Ọ bụ ezie na ndị na-agba okirikiri na-enye ohere ọla edo iji soro ụfọdụ ndị ị hụrụ n'anya nọrọ ezigbo oge, isi na-esi ísì ụtọ nke ikuku na-eme ka mkpụrụ obi gị dị ọhụrụ. Lush greenery niile bụ ọgwụgwọ ...
Ejegharị Worldwa: 11 Nnukwu egwu ga-ahụ ihe ịtụnanya
Enwere ọtụtụ saịtị dị iche iche gburugburu ụwa ndị kwesịrị ịga leta. Mana ha dabere na ụdị onye nyocha ị bụ. Somefọdụ ndị mmadụ na-ahụ ịhụ obodo ọhụrụ si gburugburu ụwa ma na-enyocha ọdịbendị dị iche iche, ndị ọzọ na-abanyekarị na on
Kedu ihe kpatara otu ndị ọka iwu ji kwesị ịme ule mkparị oge niile?
N'ebe agụmakwụkwọ, a na -ezube ule ịkwa emo ịkụziri ụmụ akwụkwọ iwu ka ha mara ahụmịhe ụlọ ikpe. A ga -etinye nkọwa na ọnyà niile iji hụ na ha yiri ihe ga -eme eme. Site na ule mkparị, ndị ọka iwu ọkachamara nwere ike ịghọta maka ike na adịghị ike…
Usoro Teknụzụ kacha elu ga-achị afọ 2018
Ihe nrụpụta pụrụ iche nke gụnyere usoro njirimara ihu na Apple's iPhone X bụ otu n'ime usoro nhazi ngwa kachasị dị ịrịba ama n'afọ gara aga. Ọ bụ ezie na usoro teknụzụ na-adị ndụ ruo nwa oge, njirimara ihu ga-achịkwa ụlọ ọrụ ngwa na…
Nyocha miri emi nke ụdị abụba niile
Mgbe ọ bụla ị nụrụ ihe ọ bụla metụtara "abụba", ọ na-adị njọ mgbe niile. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na oke abụba adịghị mma maka gị mana abụba ka ahụ chọrọ. Ị naghị anụ ọtụtụ ihe gbasara ya, mana ahụ gị chọrọ abụba.
Ebe nrụọrụ weebụ kachasị elu 7 maka ịga United Kingdom
A na -akpọ United Kingdom Obodo ukwu ọ bụghị n'efu - ọ bụ ngwakọta nke mba anọ n'otu setịpụrụ. Royal England na nlegharị anya ya, ụlọ ndị mgbe ochie na ụlọ Wales, ịma mma dị egwu nke ọmarịcha ugwu na ọdọ mmiri nke Scotland, obodo ochie ...
6 Mejọrọ imewe Weebụ agaghịzi enwe ike imeli ya
Emepụtala webụsaịtị mara mma mana ị naghị etinye ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ mkpesa maka ịnyagharị. O yikarịrị ka enwere mmejọ imewe webụ ole na ole. N'otu aka ahụ, webụsaịtị ahụ bara uru ma dịkwa mfe iji mana ọtụtụ ndị ọrụ na-eche…
Ọdịnaya Marketing vs Njikọ Njikọ
Enwere ọtụtụ blọọgụ na ụlọ ọrụ SEO niile na-ekwu ihe dị iche iche iji nweta ọkwa na ibe mbụ nke Google. N'ime ọnwa 12 gara aga, anyị na-anwale echiche ndị a niile. Anyị ga-etinye echiche SEO ndị a niile n'ihe ndina…
2016 na-agbadata, nke pụtara na ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọchụnta ego na-amarịrị n'ihu ma a bịa n'ịhazi ahịa dijitalụ maka afọ na-abịa. Ọ na-akpụzi ịbụ afọ na-atọ ụtọ n'ofe ọtụtụ ụlọ ọrụ ka anyị na-abanye na 2017, yana ikekwe…
Ihe osise eserese 10 na-ewu ewu na 2017 na gafere
Ọdịmma na-apụta, dọta uche, na-eto eto ma mgbe obere oge ma ọ bụ ogologo oge gafere ọnwa ole na ole ruo afọ ha ga-apụ n'anya. A bịa n'ichepụta eserese anyị ahụla ọtụtụ usoro na-apụta n'ime afọ ole na ole…
'Ve biala ebe egwuregwu. O nwedịrị ike ịbụ na ị gara ebe a na-eme ice. Ma ì nweela mgbe ị na-achọ ị grabụ ihe ọ inụ inụ na mmanya dị n'okpuru mmiri kpamkpam? Kedu maka ụlọ ịsa ahụ ọha na eze gbanwere ebe ezumike mmanya? Ọ bụrụ na-amasị gị…
Hiring Pearson Airport Limos - Adfọdụ Uru
Kedu ihe bụ mmeghachi omume mbụ gị oge ị hụrụ limousine? Otu n’ime ihe ị na-eme nwere ike iju gị anya n’ihi na o nwere ike ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị n’ógbè gị. Fọdụ ndị mmadụ nwere echiche na naanị ndị a ma ama nwere ike ịgba ịnyịnya limousines mana…
Ngwaọrụ 6 Onye nrụpụta ọ bụla kwesịrị ịma gbasara ya
Gịnị kpatara Android OS ji bụrụ nhọrọ kachasị amasị ndị mmepe? Android na-eme ka ihe dị mfe ma bụrụ sistemụ arụmọrụ mkpanaka na-enweghị ike ịkekọrịta nke dịkwa mma nke ukwuu. Iwebata ọtụtụ ngwaọrụ emeela ka ọ dịrị ndị mmepe ngwa Android mfe imepụta ihe ọhụrụ…
Etu esi efe efe klaasị mbu na ego
Ga njem na klas mbụ bụ okomoko nke ọtụtụ mmadụ agaghị akwụli, mana ọ bụrụ na ịnwe ogologo ụgbọ elu n'ihu gị, itinye ego ahụ na klaasị mbụ ma ọ bụ azụmaahịa nwere ike ime ka njem gị bụrụ nke ọma. Ọ bụrụ n ’ide tiketi gị n’ịntanetị, ị gaghị adịkarị usually
Ọnọdụ Ntụrụndụ Maka Malayalees Na USA
by Ogbaaghara Sct
A na-ahụta Malayalam dị ka otu n’ime asụsụ ndị bụ isi nke India. Agbanyeghi na Malayalam bu asusu ala India bu Kerala, mana akuku ya bu obodo ndi ozo dika Tamil Nadu na Karnataka. Dabere na nyocha ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ India 38…
Ihe 5 You ghaghi ima tupu i sonye ulo akwukwo egwu
Schoollọ akwụkwọ egwu bụ ihe dị mkpa maka ndị egwu niile na-achọsi ike, ndị chọrọ ịkpụzi nka ha site na ịbụ akụkụ nke gburugburu ebe obibi na-enyere aka n'ịmepụta ndị egwu dị egwu. Fọdụ ndị na-arụ ụka na, ọ bụrụ na ị nwere nkà n'ezie…
Etu ị ga - esi nyere onye nri gị aka inweta ihe eji arụ ọrụ ka mma
Bụ onye isi nri n'ụlọ oriri na ọutedụutedụ a ma ama pụtara ọnọdụ pụrụ iche na ịkwanyere ùgwù n'ezie na ụlọ ọrụ ile ọbịa. Onye siri nri nwere ike ime ma ọ bụ mebie ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. Amaara m ụlọ oriri na ọ withụ restaurantụ nwere egwu dị ndụ n'akụkụ m ebe egwu ahụ mere na mberede mana…
Mee njem na Delhi ịgagharị ya dịka ọ dịtụbeghị mbụ
New Delhi bụ obodo na -enye ume ma na -adọrọ mmasị n'agbanyeghị na ọ nwere ike bụrụ ihe siri ike maka ndị ga -awụ akpata oyi n'ahụ na -amaghị ọtụtụ ihe ha ga -eme n'obodo. Edemede a agwaghị gị maka ihe kpatara ịnụ ọkụ n'obi maka obodo…
Asia/Ntugharị Njem/Nyocha banyere njem
Ihe Obi Exctọ Na-eme Na Dubai
Lezienụ njem njem na Dubai, nke kachasị dị n'etiti ndị kachasị ele anya mgbe ị gachara na mbara ala ma nweta ihe ụtọ niile obodo ahụ na-eweta. Isiokwu a na-atụle ma eleghị anya ihe ndị kachasị mma ma na-atọ ụtọ ị nwere ike ịme mgbe…
Etu ị ga - esi zọpụta ndị ọzọ na LA Roadtrip ọzọ
Nọgide na-emefu ego na njem njem nwere ike isi ike, mana ọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ị buru ụzọ mee atụmatụ ma jigide atụmatụ gị. Kwado njem na Los Angeles nwere ike ịba ụba iji hụ ma mee, yabụ ọ bụ ezi echiche inye…
Health/si ebi ndụ
Nsogbu ndị a na -enwekarị n'ụra ụra bụ ụmụaka na otu esi edozi ya
Nwa gị ọ na -enwe nsogbu ịlakpu ụra ọzọ? Ịghara idozi nsogbu ahụ nke ọma nwere ike ịbụrụ gị na nwa gị nsogbu abalị. Ọtụtụ nchọpụta na -egosi na ụmụaka nwere àgwà ihi ụra na -ezighi ezi nwere ike nweta ahụ ike ha na enweghị ike ịmụta ihe. Ezigbo ihe…
1 2 3 ... 386 Osote
E nwere ndị kwenyere na ndụ bidoro ebe a - gafee eluigwe na ala, yana agbụrụ ụmụ mmadụ nwere ike ịbụ nna nna nke ndị Ijipt ma ọ bụ ndị Toltec ma ọ bụ ndị Mayan. Fọdụ kwenyere na a ka nwere ụmụ nwoke nke mmadụ ndị na-alụ ọgụ ugbu a ịga ebe ọzọ gafere eluigwe.
Ihe omume na onyinye15
si ebi ndụ208
Nyocha banyere njem28
A na - ahụ ozi njehie a naanị maka njikwa WordPress
Njehie: Ọ nweghị ndepụta ahụrụ.
Biko gaa na ibe ntọala nri Instagram ka ịmepụta ndepụta.